Cry စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ
ဒီတပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ ငိုတယ် (Cry) ကိုအခြေခံ တဲ့အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Don’t cry over split milk, Cry wolf နဲ့ Hue and cry တို့ကိုတင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Don’t cry over spilt milk
Don’t (မလုပ်ဖို့ပြောတာ)၊ cry (ငိုတာ)၊ over (အတွက်၊ အပေါ်)၊ spilt (ဖိတ်ကျတာ)၊ milk (နို့) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဖိတ်ကျပြီးသား နို့အတွက် ငိုမနေနဲ့၊ မျက်ရည်ကျမနေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ဖိတ်ကျသွားတဲ့နို့ကိုပြန်ကြုံးယူပြီးသောက်လို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒ်ီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ဖြစ်ပြီးသွားတာ ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အတွက် ဝမ်းနည်းတသမဖြစ်ဖို့ သတိပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေအနေနဲ့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့တခုခုအတွက် နှမျောတသဖြစ်ကြတဲ့ ဓလေ့ရှိပြီး၊ ဖြစ်ရပ်တခုခုအတွက်လည်း နောင်တရမဆုံးဖြစ်ပြီး ပြောမဆုံးဖြစ်ကြလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ Don’t cry over spilt milk ဆိုပြီးတော့ ဖိတ်ကျသွားတဲ့နို့ဟာ ပြန်ရမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် နှမျောပြီး ငိုမနေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ သုံးနှုန်းပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့် လူတွေအနေနဲ့ တခုခုဖြစ်ပြီးသွားမှ ဟိုလိုလုပ်မိရင် ကောင်းသား၊ ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် ကောင်းသားလို့ဆိုပြီးတော့ ညည်းညူတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအသုံးရဲ့  သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ပြန်မရနိုင်တော့တာကို နှမျောတသမနေနဲ့၊ ဝမ်းနည်းမနေနဲ့၊ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မနေနဲ့၊ နောင်တရမနေနဲ့ ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Stop crying over spilt milk because you’ve failed your exams! Just try harder and be more prepared next time.
မင်း စာမေးပွဲကျလို့ အခုမှ နောင်တရမဆုံး ဖြစ်မနေနဲ့။ နောက်တကြိမ်အတွက် ပိုကြိုးစား၊ ပိုပြီးပြင်ဆင်ထားပါ။
(၂) Cry wolf
Cry (ငိုတာ၊ အော်တာ)၊ wolf (ဝံပုလွေ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဝံပုလွေ လို့အော်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတာကတော့ သင်ခန်းစာရစေတဲ့ခလေးပုံပြင်တပုဒ်က ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံပြင်ထဲမှာကျေးလက်ဒေသမှာ သိုးထိန်းလူငယ်တဦးက ဝံပုလွေ လာတယ်ဆိုပြီးတော့ တကယ်မလာဘဲနဲ့ အော်ပြီးအနားကလူတွေကိုနောက်ပြောင်တဲ့သဘောနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလှန့်ခဲ့လို့၊ တခြားလူတွေ ကစိုးရိမ်ပြီးလာကြည့်တဲ့အခါတိုင်း ၊နောက်ပြောင်တာဖြစ်နေတော့စိတ်ဆိုးကြတာပေါ့။ တနေ့ကျ တကယ်လဲ ၀ံပုလွေလာရော၊ အဲဒီလူငယ်က အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းတဲ့အခါဘယ်သူကမှ အရေးမစိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်၊ နောက်ဆုံးမှာ ၀ံပုလွေက သူ့ရဲ့ သိုးတွေကို ကိုက်စားတဲ့ ပုံပြင်ကနေ ဆင်းသက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက် အဓိပ္ပါယ်ကတော့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဟုတ်တယ်လို့ လုပ်ကြံပြီး မလှန့်နဲ့ ၊ အန္တရာယ်မရှိဘဲနဲ့ အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ မလိမ်နဲ့ ၊ တကယ်ဖြစ်တဲ့အခါကြ၊ဘယ်သူကမှ ယုံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သတိပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John, don’t cry wolf too often! People will stop believing you.
John ရေ မဟုတ်ဘဲနဲ့ အလကားနေရင်းနဲ့ လှန့်မနေနဲ့။ လူတွေက မင်းကို ယုံကြတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
(၃) Hue and cry
ဒီစကားလုံးက ပြင်သစ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးပေါင်းစပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး Hue (အော်တာ၊ သတိပေးတာ)၊ and (နှင့်)၊ cry (အော်တာ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အော်တာနှင့်သတိပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက ရှေးအင်္ဂလိပ်ဥပဒေတရပ်က ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ဥပဒေအရ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ လူတဦးဥပဒေချိုးဖောက်နေတာကိုမြင်ရင်၊ ဝိုင်းအော်ဖို့လိုအပ်သလို၊အဲဒီလူကိုလည်း ဝိုင်းဖမ်းပေးကြဖို့လိုအပ်တဲ့ဥပဒေကနေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ မကျေနပ်ချက်တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတွေ ဝိုင်းအော်ကြ၊ ဝိုင်းကန့်ကွက်ကြ၊ ဝိုင်းဝေဖန်ကြတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာမှာတော့ အရပ်က ဝိုင်းပြောကြသလို၊ လူသိသူသိဟိုလေးတကျော် ဖြစ်တာမျိုးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The activists raisedahue and cry about the political corruption in the country.
အဲဒီနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး မသမာမှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဟိုလေးတကျော်ကျော်ဖြစ်အောင် လှုပ်ရှားသူတွေက ဝိုင်းပြီးဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်။
ဒီသတင်းပတ် တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Cry စကားလုံးကို အခြေခံတဲ့ Idiom အသုံးတွေက Don’t cry over split milk, Cry wolf နဲ့ Hue and cry တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။